भूकम्पमा भत्केका भन्दा भत्काउनु पर्ने घर बढी छन्– महानगर प्रमुख – .:: Alpabiram
प्रकाशित: माघ ८ , २०७४ Mimraj Pandaya
पुनर्निर्माण | मिमराज पाण्डेय
भूकम्पमा भत्केका भन्दा भत्काउनु पर्ने घर बढी
काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले महानगर क्षेत्रमा भूकम्पमा भत्केका भन्दा बढी घर अझै भत्काउनु पर्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ ।
काठमाडौँमा आयोजित २ दिने भूकम्पीय प्रकोप व्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय विचार–गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य दिँदै शाक्यले यहाँका अधिकांश घरहरू मापदण्ड अनुसार नभएकाले जोखिम बढी रहेको बताउनु भयो । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणकै कुरा गर्दा उहाँले काठमाडौँ भित्रको पुनर्निर्माण पहिलेकै शैलिलै सम्भव नरहेको बताउनु भयो । “मान्छे नै छिर्न नसक्ने ठाउँमा निर्माण सामग्री कसरी पुर्याउने ?” उहाँले भन्नु भयो– अब पनि नयाँ अवधारणा अनुसार काम गर्न नसक्ने हो भने सहर सहर रहन सक्दैन ।
महानगर प्रमुख शाक्यले थप्नु भयो– “हिजो निजी आवास निर्माणमा मात्रै मापदण्ड अनिवार्य भए पनि अब सरकारी र सामुदायिक सबै खाले भवन मापदण्ड अनुसार बनाउनु पर्छ । चाहे नगरवासीले बनाउन्, चाहे अरुकसैले, नियम सबैलाई लागू हुनु पर्छ ।”
भूकम्पीय जोखिम न्युनिकरणका काम अब सङ्घीयता केन्द्रित
सिम्पोजियमकै उद्घाटन सत्रमा बोल्दै भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल – एनसेटका कायकारी निर्देशक डा. आमोदमणि दीक्षितले देश सङ्घीयतामा गइसकेकाले अब भूकम्पीय जोखिम न्युनिकरणका सबै काम सङ्घीयतामा केन्द्रित भएर गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले “जनताले दुख पाइरहेका बेला तापाईं मिटिङ गर्ने ?” भनेर युवाहरूले आफूलाई सोध्ने गरेको भन्दै यस्ता विचार गोष्ठि औषधी खुवाए जस्तो नभई, भूकम्पीय जोखिम न्युनिकरण तथा सचेतना अभिबृद्धिमा यसको दिघकालीन प्रभाव पर्ने बताउनु भयो ।
मन्दिर बनाउने कि विद्यालय ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा. हरीराम पराजुलीले दरबार हाई स्कुललाई मन्दिर बनाउने कि विद्यालय बनाउने अहिल्यै प्रस्ट हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । “मन्दिर बनाउने हो भने ठिक छ, नत्र स्कुल स्कुलकै मापदण्डमा बनाउनु पर्छ ।” उहाँले भन्नु भयो– विद्यार्थीको जीवन र भौतिक सम्पतीको सुरक्षाका लागि विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनै पर्छ । हामीले मान्छेको जीवनलाई प्रामिकता दिनु जरुरी छ ।
माघ ७ गते बाट चलेको २ दिने राष्ट्रिय सिम्पोजियममा रानीपोखरी र दरबार हाइस्कुलको पुनर्निर्माणबारे भइरहेको विरोधका बारेमा बोल्दै उहाँले सम्पदा बनाउनु र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो ।
“भूकम्प सबैले विर्सिसकेको बेलामा जान्छ, अहिले पनि जान सक्छ या भोलि पनि जान सक्छ । भूकम्पले ८० वर्ष नै कुर्छ भन्ने छैन । त्यसलै हामीले भूकम्पीय सचेतना, पूर्वतयारी र विपद् प्रतिकार्य क्षमता वृद्धि गर्नु जरुरी छ ।” उहाँले थप्नु भयो ।
विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा एनसेटले गरेको पहल प्रसंशनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो । यस पहलको नेतृत्व सरकारले गरेर एनसेट जस्ता संस्थाको सहयोग लिन सक्नु पर्नेमा उल्टो भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो– “त्यसैले सरकारी निकाय अझै अघि बढ्नु जरुरी छ ।”
विपद प्रतिकार्य तथा जोखिम न्युनिकरणका काम समुदायबाटै प्रभावकारी हुने बताउँदै पराजुलीले वडा स्तरमा विपद जोखिम न्युनिकरण इकाइलाई पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । सबैभन्दा पहिले अस्पताल सुरक्षित हुनु पर्ने, त्यससँगै विद्यालय र आवासीय भवनहरू सुरक्षित हुनु पर्ने पराजुलीको भनाइ छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका उपमाहानिर्देशक मणिराम गेंलालले नीति नियम र ऐनहरू समयानुरुप परिमार्जन हुँदै आएकाले अब यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
भूकम्पीय प्रकोप व्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय विचार–गोष्ठी भूकम्प सुरक्षा दिवसका नियमित कार्यक्रमहरू मध्ये कै एक हो । यो विचार–गोष्ठी विपद् प्रतिकार्य, पुर्वतयारी र जोखिम न्युनिकरणमा भए/गरिएका वर्षभरिका सिकाई तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने शृङखाल हो ।
१२ ओटा सैद्धान्तिक सत्र रहेको यस पटकको विचार गोष्ठीमा विपद व्यवस्थापन, जोखिम न्युनिकरण र पुनर्निर्माणको काममा संलग्न रहेका निकाय र व्यक्तीहरूकाे सहभागिता रहेकाे थियो ।
:: सम्बन्धित शीर्षकहरु | पुनर्निर्माण बाट
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्रः प्रधानमन्त्री
विद्यालय भूकम्पीय सुरक्षाका लागि ५ वर्षे “सुरक्षित स्कुल परियोजना सुरु”